कतै तपाईँ दहीसँग यी खानेकुरा त खाइरहनु भएको छैन ? स्वास्थ्यमा पुग्छ असर ! – Makalukhabar.com
कतै तपाईँ दहीसँग यी खानेकुरा त खाइरहनु भएको छैन ? स्वास्थ्यमा पुग्छ असर !
मकालु खबर	 २०७७ भाद्र ३१ गते प्रकाशित 212
एजेन्सी । कुनै खानेकुरा धेरै खाँदा स्वास्थ्यमा बेफाइदा पुग्छ भने थाेरै खाँदा स्वस्थ भइन्छ । कुनै खानेकुराले अन्य खानेकुरासँग मिसाएर खाँदा असर पुर्याउँछ भने कुनै खानेकुरा सिंगल खाँदा स्वास्थ्यमा फाइदा पुग्छ ।
यस्तै खानेकुराहरूकाे सूचीमा पर्छ दही पनि । दही खान नरुचाउने कमै हुन्छन् । दही खानु शरीरका लागि फाइदाजनक पनि हुन्छ । तर, जति दही खाँदा फाइदा हुन्छ उति नै बेफाइदा पनि हुन्छ । यदि दही गलत खाद्य पदार्थसँग खाँदा यसले शरीरलाई बेफाइदा पनि पुर्याउँछ ।
आयुर्वेदका अनुसार यी ५ खाद्यपदार्थसँग दहीको सेवन गर्नुहुँदैन :
माछा – दही र माछा एकसाथ खानुहुँदैन । दही र माछा दुवै प्रोटिनको स्रोत हो । यो दुवै मिसाएर खाँदा पेटमा समस्या हुन सक्छ । दही दूधबाट बन्छ भने माछा मामंशाहारी खाना हो । यसले पेटमा विभिन्न समस्या पैदा गर्छ ।
कोरोना भगाउन साबुन उत्तम कि ह्यान्डवास ?
प्याज तरकारीमा मात्र हैन स्वास्थ्य र सौन्दर्यमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ
केराले हुनसक्छ यी ५ बेफाइदा, खाली पेटमा लसनु खानुकाे छन् फाइदै फाइदा